जातीय अत्याचारको यो रूप : राष्ट्रिय कीर्तिमानी खेलाडीलाई पनि कुटपिट, अस्पताल भर्ना
२०७७ भदौ १० बुधबार ०४:०९:००
कुट्दै लखेटिएका दलित युवकलाई जोगाउन खोज्दा सात महिनाकी गर्भवती चन्द्रकलामाथि बेल्टले निर्घात प्रहार
सोमबार राति ८ बजेतिर झापा मेचीनगर–१३ चारआलीका राजन दर्जी आत्तिँदै र गुहार माग्दै स्थानीय चिया पसलभित्र प्रवेश गरे । उनलाई छिमेकी दुर्गा श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती विष्णुले गालीगलौज गर्दै लखेटिरहेका थिए । जातीय विभेदयुक्त शब्दमा गाली गर्दै आइरहेका उनीहरूलाई चियापसलकी सञ्चालक तथा कीर्तिमानी राष्ट्रिय खेलाडी चन्द्रकला लामगादेले रोक्न खोजिन् । र, ‘अहिलेको जमानामा पनि किन जातीय विभेद गर्ने शब्द बोल्नुभएको’ भन्दानभन्दै उनीमाथि नै जाइलागे श्रेष्ठ दम्पती । ‘तँ पनि तल्लो जातकी रैछेस् भन्दै आक्रमण गरे,’ चन्द्रकला भन्छिन् । श्रेष्ठ दम्पतीको निर्घात कुटपिटबाट नेपाल पुलिस क्लबमा आबद्ध एथ्लेटिक्स खेलाडी चन्द्रकला सख्त घाइते भएकी छिन् । सात महिनाकी गर्भवती उनको बिर्तामोडस्थित बिएन्डसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
कुटपिटबाट सख्त घाइते भएकी कीर्तिमानी राष्ट्रिय खेलाडी चन्द्रकला लामगादे झापा बिर्तामोडस्थित बिएन्डसी अस्पतालमा उपचार गराउँदै
सोमबार राति नै उनीहरू कुटपिटबारे जानकारी गराउन चारआलीस्थित प्रहरी चौकीमा गए । प्रहरीले दुवै पक्षलाई मिल्न भनेको थियो । राति १२ बजेपछि छटपटाउन थालिन् । र, उनलाई मध्यरातमा स्थानीय मनकामना अस्पताल पुर्‍याइयो । ‘कुटपिट गर्नेबित्तिकै त खासै केही भनिनन् । राति १२ बजे सुत्नै नसकेर छटपटाइन् । हतार–हतार नजिकैको अस्पताल लगेँ । त्यहाँ ठीक नभएपछि यहाँ (बिएन्डसी) ल्याएका हौँ,’ सुमनले भने, ‘उनी (चन्द्रकला)चाहिँ ठीकै छिन् । तर, पेटको बच्चालाई असर परेका कारण रेस्ट गर्नुपर्ने डाक्टरले बताएका छन् ।’
‘उहाँ (श्रेष्ठ)को घरमुनि होटेल छ । त्यहाँ दाइ (राजन) जानुभएको रहेछ । उहाँलाई पहिलादेखि नै तुच्छ शब्द प्रयोग गर्दै गाली गरिरहनुहुन्थ्यो । सोमबार पनि त्यसरी नै गाली गर्दै बेल्टले कुट्दै खेदाए,’ चन्द्रकलाले भनिन्, ‘उहाँ बचाउ बहिनी भन्दै हामी खाना खाइरहेको ठाउँमा आउनुभयो । जातीय रूपमै हेला गरेपछि मलाई चित्त बुझेन ।’
कुटपिटबाट घाइते चन्द्रकलाका पति सुमन खाती
कुटपिटबाट घाइते चन्द्रकलाका पति सुमन खातीको शरीरमा बसेको डाम
जति कुटाइ खाए पनि जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाइरहने चन्द्रकला बताउँछिन् । ‘एक दिन मर्नु नै छ । विभेदविरुद्ध बोल्दा मारे पनि मारुन् । किन अपमान सहेर मर्ने ?’ उनी भन्छिन्, ‘यसपटक पनि विभेदविरुद्ध बोल्नु नै मेरो गल्ती भयो । त्यही भएर कुटाइ खाएँ । तर, विभेदविरुद्ध बोल्न कहिल्यै छाड्दिनँ ।’
ताप्लेजुङको विकट गाउँ तिलबारीमा हुर्किएकी चन्द्रकला सानैबाट विभेद भोग्दै हुर्किन् । सानैबाट खेलमा मोह भएकी चन्द्रकला स्कुलदेखि नै फुटबल, भलिबललगायत खेलमा सहभागी हुन्थिन् । उनले जिल्लामा हुने राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा धेरैपटक भाग लिएकी थिइन् । खेलमै भविष्य खोजिरहेकी चन्द्रकला सात वर्षअघि नेपाल प्रहरीमा भर्ती हुँदै पुलिस क्लबमा आबद्ध भइन् । पुलिसमा रहेर उनी ‘कीर्तिमानी खेलाडी’ बनिन् ।
आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा एथ्लेटिक्सतर्फ नेपाल पुलिस क्लब तेस्रो भएको सिल्डका साथ चन्द्रकला
दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रियस्तरका खेल खेलेकी उनी तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पनि सहभागी भएकी छिन् । उनले सातौँ र आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा सटपुट र ज्याभलिन थ्रोमा आफैँले यसअघि बनाएको रेकर्ड तोड्दै कीर्तिमान राखिन् । र, दुई/दुईवटा स्वर्णपदक जितिन् । यस्तै, आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा एथ्लेटिक्सको सटपुटमा १२ दशमलव ०४ मिटरको नयाँ कीर्तिमानी बनाइन् । त्यसअघि पनि यो कीर्तिमान उनकै नाममा थियो । यस्तै, आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदको ज्याभलिन थ्रोमा यसअघि आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमान तोड्दै ४४ दशमलव ०४ मिटर थ्रो गर्दै नयाँ कीर्तिमान कायम गरिन् । जातीय विभेदका साथ निर्घात कुटपिट भए पनि आफूले अझै पनि खेल्ने र देशका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पदक ल्याउने अठोट चन्द्रकलाको छ ।
दोषीमाथि कडा कारबाही माग
खेल क्षेत्रका हस्ती र संगठनले चन्द्रकलामाथि भएको घटनाको निन्दा गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाही माग गरेका छन् ।
एथ्लेटिक्सका वरिष्ठ प्रशिक्षक सुशील नरसिंह राणाले घटनाको भत्र्सना गरे । ‘यो निन्दनीय घटना हो । जातीय विभेद कसैमाथि पनि हुनु गलत कुरा हो । अझ खेलाडीमाथि यो दुव्र्यवहार सह्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘खेलाडी कुनै जातको हुँदैन । उसले कुनै एउटा जातको लागि मात्रै खेल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिँदा खेलाडीले देशका लागि खेलेको हुन्छ । उसले जितेको पदकमा सम्पूर्ण देशले गर्व गर्छ ।’ चन्द्रकला निकै प्रतिभावान् खेलाडी भएको उनले बताए । ‘उनले राष्ट्रिय स्तरमा त २०औँ वर्षदेखिका पुराना कीर्तिमान भंग गरेर आफूलाई प्रमाणित गरेकी छिन्,’ राणाले भने, ‘यदि राम्रो प्रशिक्षण पाउने हो भने उनले कम्तीमा दक्षिण एसियाली प्रतियोगितामा ज्याभलिन थ्रोतर्फ स्वर्णपदक नै जित्न सक्छिन् ।’
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरे । ‘संविधानले नै जातीय दुव्र्यवहारका घटनालाई प्रतिबन्धित गरेको छ । संविधानले रोक लगाएको यस्तो अमानवीय घटनाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ घोर भत्र्सना गर्छ,’ उनले भने, ‘घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ ।’
नेपाल प्रहरीको खेलकुद रेखदेख तथा व्यवस्थापक भरत शाहले गर्भवती अवस्थाकी खेलाडीमाथि अमानवीय घटना भएको बताए । ‘कसैमाथि पनि हुन नहुने यस्तो घटना राष्ट्रको गहना खेलाडीमाथि भएको छ । यसले हामीलाई पनि दुःखी तुल्याएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानले पनि प्रतिबन्धित गरेको यस्तो घटनामा संलग्नलाई कारबाही हुन्छ नै । यही कारबाहीलाई हेरेर फेरि यस्तो घटना नदोहोरियोस् ।’
जातीय विभेदका पछिल्ला घटना
इलाममा दलितसँग बिहे गरेकी छोरीलाई सँगै बसेर बुबाको अन्तिम संस्कार गर्न दिइएन, सिराहामा सामूहिक बलात्कारमा उजुरी दिनेको हत्या
दलितसँग विवाह गरेको भन्दै इलामको माई नगरपालिका–२ दानाबारीकी यामकला आचार्य विकले बुबाको अन्तिम संस्कार पनि परिवारसँगै गर्न पाइनन् । बुबा चन्द्रप्रसादको किरियामा परिवारसँगै बस्न माइती पक्षले नदिएपछि उनी छुट्टै बसिन् ।
यामकलाले १२ वर्षअघि दलित समुदायका रत्नबहादुर विश्वकर्मासँग प्रेमविवाह गरेकी थिइन् । उनलाई अहिलेसम्म माइतीले बोलाएको छैन । बुबाको दाहसंस्कारका लागि जाँदा पनि उनले अपमानित हुनुपर्‍यो ।
‘मैले बुबाको अंश मागेको होइन । जसरी हुन्छ गरिखान्छु । १२ वर्ष बोलाउनुभएन, तर अन्तिम संस्कार सबैसँग गर्न दिँदा के हुन्थ्यो ? दलितसँग बिहे गरेर मैले के बिगारेँ र ?’ यामकलाले भनिन्, ‘बुबाको मुख पनि हेर्न दिइएन ।’
यामकलाको घरबाट माइती करिब तीन सय मिटर दूरीमा छ । बुबाको निधन भएको थाहा पाउनेबित्तिकै उनी रुँदै माइती पुगिन् । १२ वर्षपछि माइतीको आँगन टेकेकी उनलाई गाउँले र बहिनीले झम्टिए । ‘म पुग्नेबित्तिकै गाउँकी लक्ष्मी दंगालले तँलाई बाँचुन्जेल चाहिएन, अहिले के हेर्न आइस् ? आँगन नटेक् भन्दै झपारिन्,’ यामकलाले भनिन्, ‘ठूलोबुबाको छोरी पारू त कुटुँलाझैँ गरेर पाखुरा सुर्केर आई । अरू वेला त दलितसँग गएको भनेर बाटो हिँड्दा थुक्थे पनि ।’
यामकलाले घरमा मात्र होइन, बुबाको अन्तिम संस्कारमा घाटमा समेत दलितसँग बिहे गरेकै कारण विभेद भोग्नुपर्‍यो । घरमा पुग्दा झपारिएकी उनी बुबाको मुख हेर्न र अन्तिम संस्कारमा सहभागी बन्न माईघाट पुगिन्, तर त्यहाँ पनि विभेद भयो । ‘छेउमा जाने वातावरण नै थिएन । सबै आफन्त बुबाको छेउमा थिए । म पर अलग्गै बसेँ । बुबालाई दागबत्ती दिइन्जेल मलाई थाहा छ, त्यसपछि अचेत भएँ ।’
मृत्युको अन्तिम संस्कारका वेला श्रद्धाञ्जलीसभा गरिएको थियो । त्यसक्रममा परिवारका सबै सदस्यको नाम लिइए पनि छोरी र ज्वाइँको नाम नलिइएको यामकलाको गुनासो छ । ‘म उहाँको सन्तान होइन र ?’ उनले भनिन्, ‘यो हल्लाखल्ला भएपछि बिहान काकाले अरूका कुरामा नलाग् । कामपछि हामी मिलौँ भन्नुभयो । बुबाको अन्तिम संस्कारमा त नमिल्ने कामपछि मिल्लान् र ?’
यामकला माई नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णुमाया रिमाल आचार्यकी भतिजी हुन् । त्यसैले उनको काकीसँग पनि दुखेसो छ । यद्यपि, उनीहरूको परिवार वर्षौंअघि नै छुट्टाछुट्टै बसिरहेका छन् । ‘काकी त कम्युनिस्ट पार्टीको नेता । उहाँ दलितका पक्षमा बोल्दै हिँडेको सुनेको थिएँ । तर, उहाँ र काकाले पनि केही भन्नुभएन,’ यामकलाले भनिन् ।
यामकलाका श्रीमान् रत्नले विभेद भयो भनेर सुनाउने ठाउँ पनि नभएको बताए । ‘काकी उपप्रमुख, उहाँकै नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिमा गुनासो गर्ने होला । उहाँ नै घरको मान्छे भएपछि हामीले कसरी न्याय पाउँला,’ उनले भने ।
माई नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णुमायाले आफ्नो परिवार वर्षौँअघि छुट्टिएको बताइन् । ‘जेठाजु २५ वर्षअघि छुटिनुभएको हो । हामी एउटै घरको होइन । फेरि पनि मैले त सम्झाएकै हुँ,’ उनले भनिन्, ‘मलाई उपप्रमुख होइन, बुहारीको नजरमा पनि हेरिदिनू । कहिलेकाहीँ आफ्नो घरको त जिम्मा लिन सकिँदैन, जेठाजुको घरको कसरी लिनु ?’ उनले आफू जहिले पनि जातीय विभेदको विरुद्धमा भएको बताइन् । छोरीलाई सँगै राखेर किरिया बार्न परिवारमा पनि कुरा राखेको, तर आमा र भाइले नमानेको उनको दाबी छ ।
सामूहिक बलात्कारमा उजुरी दिनेको हत्या, परिवारलाई धम्की
दुई वर्षअघि सामूहिक बलात्कारको घटनामा उजुरी दिएका सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–३ कचन्दाहा टोलका ४२ वर्षीय त्रिभुवन राम (भूपेन्द्र)को हत्या गरिएको परिवारजनले बताएका छन् । हत्याको आरोप लागेका स्थानीय सुरेन्द्र पाल गडेरीसहित सातजनाका आफन्तले किरिया बसेका त्रिभुवनका छोरा रोशनलाई उडाइदिने धम्की दिएका छन् ।
२७ फागुन ०७४ मा स्थानीय एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो । त्यस घटनामा त्रिभुवनले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । उनले दिएको उजुरीका आधारमा पक्राउ परेका स्थानीय एटलान्टिक चौधरी, अजयकुमार चौधरी, अर्जुनकुमार साह र मनोजकुमार साहलाई जिल्ला अदालतले २९ माघ ०७६ मा १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । चारैजना राजविराज कारागारमा कैद भोगिरहेका छन् । त्यही घटनाका आरोपी स्थानीय बबी चौधरी र मिथिलेशकुमार साह भने फरार छन् ।
सामूहिक बलात्कारमा जेल सजाय भोगिरहेका मनोजका ठूलोबुबा शम्भु साहले २७ असारमा त्रिभुवनलाई धम्की दिएका थिए । ‘शम्भु साहले पुरानो घटनाको कुरा निकाले नराम्रो हुन्छ भन्दै धम्क्याएका थिए,’ त्रिभुवनका बुबा कुशेश्वर रामले भने, ‘धम्की दिएको तीन दिनपछि त यस्तो घटना भइहाल्यो । छिमेकी गाउँ गएका छोराको लास खोलामा भेटियो ।’ अहिले उनीहरूले किरिया बसेको नातिलाई पनि धम्क्याइरहेको कुशेश्वरले गुनासो गरे । ‘छोरा त गयो, नातिलाई पनि के पो गर्छन् । चिन्ता लागेको छ,’ उनले भने ।
यससँगै मोहीको विवाद पनि जोडिएको छ । स्थानीय रासलालपाल गडेरीको १० कट्ठा जग्गामा भूमिसुधार कार्यालयले जोताहा कुशेश्वरलाई पाँच कट्ठा मोही कायम गरिदिएको थियो । त्यही जग्गामा त्रिभुवन २८ असारमा रोपाइँका लागि हलगोरुसहित जोत्न गएका थिए । उनलाई रासलालले जोत्न दिएनन् । त्यसपछि उनले रूपनी इलाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । २९ असारमा प्रहरी कार्यालयमा भएको छलफलमा त्रिभुवनलाई नै जोत्न दिनुपर्ने सहमति भएको थियो । त्रिभुवनको स्थानीय सुरेन्द्र पाल गडेरीसँग पनि पाँच कट्ठा जग्गाको मोही विवाद थियो ।
प्रहरी कार्यालयबाट घर फर्केपछि उनी साँझ साढे ६ बजेतिर साइकल लिएर शम्भुनाथ–४ मा पर्ने छिमेकी गाउँ नरही गएका थिए । ‘रातिसम्म पर्खियौँ, घर नआएपछि सुत्यौँ,’ त्रिभुवनकी पत्नी घुरनीदेवीले भनिन्, ‘भोलिपल्ट दिउँसोसम्म पनि घर नफर्किएपछि खोजी ग¥यौँ । गोठालाहरूले गाउँकै मुतनी खोलामा शव भेट्टाए ।’ मोही हक दिनुपर्ने भएपछि सुरेन्द्रसहितको समूहले हत्या गरेको घुरनीदेवीको आरोप छ ।
सुरेन्द्रसहित यसअघि बलात्कारको आरोपमा जेलमा रहेकाहरूको आफन्तजनले हत्या गरेको भन्दै घुरनीदेवीले सातजनाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएकी छिन् । उनले दिएको उजुरीका आधारमा स्थानीय ४५ वर्षीय शम्भु साह, उनका भाइ ४० वर्षीय प्रभु साह, ३२ वर्षीय पंकज चौधरी र ३५ वर्षीय सुरेन्द्र पाल गडेरी (सुन्दर) पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका एसपी कृष्ण प्रसाईंले बताए । चारैजनालाई ३२ असारमै पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद थप गरिएको र अन्य तीनजनाको खोजी भइरहेको एसपी प्रसाईंले बताए ।
प्रहरीका अनुसार प्रभु दुई वर्षअघि सामूहिक बलात्कारमा जेल परेका अर्जुन र मनोजका दाइ हुन् । त्यस्तै, त्रिभुवनको हत्याको आरोपमा पक्राउ परेको पंकज पनि दुई वर्षअघि सामूहिक बलात्कारमा जेल परेका एट्लान्टिकका काका हुन् ।
सामूहिक बलात्कारको अपराधमा जेल परेका व्यक्तिहरूको आफन्त र मोही जग्गाको विवाद भइरहेका व्यक्तिहरूले मिलेर त्रिभुवनको हत्या गरेको परिवारजनको आरोप छ । प्रहरीले भने यसमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । स्थानीय बासिन्दा तथा दलित अधिकारकर्मीले उनको हत्या घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । प्रदेश २ की सांसद रुबी कर्णले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिएका आधारमा धम्की दिनु र त्यसपछि बीभत्स हत्या हुनु संयोग मात्रै नभएको बताइन् । ‘योजना बनाएर हत्या गरिएको छ, दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ,’ सांसद कर्णले भनिन् ।
#जातीय अत्याचार # जातिय विभेद